ကမ္ဘာကို အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေသည့် တရုတ်ထုတ်ကုန် စားသောက်ကုန်အတုများ
ထိုနှစ်ချက်သည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် သမ္မတရှီကျင်းပင် အာဏာမရသေးမီ လအနည်းငယ်ကတည်းက တရုတ်နိုင်ငံ၏ပုံရိပ်ကို ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်စေသော ရှက်စဖွယ်အစွန်း အထင်းကြီးနှစ်ရပ် ဖြစ်နေခဲ့သည်။ သမ္မတလောင်းရှီက အချက်နှစ်ချက်ကိုကိုင်ကာ လိမ္မာပါးနပ်စွာ မဲစွယ်စည်းရုံးနိုင်ခဲ့သည်။
သမ္မတရှီသည် အာဏာလက်ကိုင်ရရှိပြီး ငါးလအကြာတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁၇သန်းခန့် တန်ဖိုးရှိသော ထုတ်ကုန်အတုပေါင်း ၂၁ သန်းကျော်ကို နှိမ်နင်းသည့်ပွဲကြီး စတင်ကျင်းပတော့သည်။ Guangdong ပြည်နယ်တစ်ခုတည်း၌ပင် တရားမဝင်စက်ရုံပေါင်း ၅ဝဝခန့် ပိတ်ပစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ထုတ်ကုန်အတု ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သံသယရှိသူပေါင်း ၁ဝဝဝ ကျော်ခန့်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်အတုများတွင် ဝိုင်၊ စီးကရက်၊ အဝတ်အထည်မှအစ ဖိနပ်လုပ်ငန်းအထိ ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂ဝ၁၃တွင် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေကို တိုးမြှင့်လိုက်ပြီး အတုအပလုပ်သူများကို သတင်းပေးသည့် ပြည်သူများကို မှောင်ခို ပစ္စည်း၏ တန်ဖိုး ၁ဝဆနှင့် ညီမျှသောဆုကို ချီးမြှင့်ခြင်းဖြင့် အတုအ ယောင်များကိုဖမ်ဆီးသည့်ကဏ္ဍကို အရှိန်မြှင့်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ ပစ္စည်းတုများရောင်းဝယ် ဖောက်ကားနေသည့် စူပါမားကတ်ပိုင်ရှင်များမှအစ ပစ္စည်းတုထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံမှ ဝန်ထမ်းများအထိ လူသိန်းချီခန့်ရှိသော ထုတ်ကုန်တုနှင့် ပတ်သတ်ဖူးသူများသည် အစိုးရသတင်းပေးများအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတော့၏။
၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် ရှီကျင်းပင် လက်အောက်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော အမျိုးသားပြည်သူကွန်ဂရက် အထူးခုံရုံးသည် ဘေဂျင်း၊ ရှန်ဟိုင်းနှင့်ကွမ်ကျိုးတို့တွင် ပေါ်ထွက်လာပြီး ဥာဏပစ္စည်းကာကွယ်ရေး၊ မူပိုင်ခွင့် နှင့်ပတ်သတ်သည့် ပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်အထိ ထုတ်ကုန်တုနှင် မူပိုင်ခွင့် အရေးကိစ္စများ အဆက်မပြတ်ကိုင် တွယ်နေသော်လည်း တရုတ်တွင် အတုအပကို မှီကာ စီးပွားရှာခြင်း ကား ရပ်တန့်မသွားပေ။
နိုင်ငံတကာတွင် 'တရုတ်ဖြစ်' စားသောက်ကုန်များ၊ ပစ္စည်းတုများ ဖမ်းဆီးမိသည့် သတင်းများ၊ ပိတ်ပင် တားမြစ်သည့် သတင်းများကမူ မကြာခဏကြားနေရမြဲ ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကျော်ဖိနပ်များထုတ်လုပ်သည့် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုမှ ဒီဇိုင်းသစ်ကို ရိုက်ထုတ်နေချိန်တွင် အတုကလည်း အစစ်နှင့်မခြား ဈေးကွက်ထဲသို့ အတူရောက်နေတတ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် iPhone သည် သာမန်အမေရိကန်တစ်ဦးလက်ထဲမရောက်သေးမီ အတုသည် ရှန်ဟိုင်းလေဆိပ်တွင် ကမ္ဘာ့ကွန်ရက်နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ အလုပ်လုပ်နေ လိမ့်မည်။
တရုတ်မှ ဖိနပ်တုများ ဥရောပသို့ တင်ပို့ရောင်းချခြင်းများ မရပ်တန့်သေးသလို ဆေးဝါးအတုများကလည်း အာဖရိကနှင့် အရှေ့တောင်အာရှတို့ သို့ လှိမ့်ဝင်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်။
တရုတ်တွင် အတုပြုလုပ်ခြင်းသည် ဒေါ်လာ ဘီလျံ ၄ဝဝ တန်ဖိုးရှိသော ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းအဖြစ် လည်ပတ်လျက်ပင်ရှိနေသေးသည်။
အတုထုတ်လုပ်သူများသည် များသောအားဖြင့် ကြားလူများက တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ကာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ စက်ရုံတစ်ခုတည်းမှ အပြည့်အစုံထုတ်လုပ်သည်ထက် အစိတ်အပိုင်းများ သီးသန့်ထုတ်လုပ်သည်က ဥပဒေလက်တစ်လုံးခြားလုပ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ထို့ပြင် အလုပ်သမားလိုအပ်ချက်နှင့် ကုန်ကြမ်း ဖြည့်တင်းရာတွင်လည်း သက်သာကြသဖြင့် အစိတ်အပိုင်းတု ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများ ပိုမိုပေါ်ပေါက်လာ သည်။
ထို့ပြင် တရုတ်တွင် လုပ်အားခသက်သာခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတကာမှ ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ စက်ရုံများတည်ထောင်ရာ နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်လာခဲ့ပြန်သည်။ မူရင်းအမှတ်တံဆိပ် ပိုင်ရှင်များက မိမိလုပ်ငန်းများကို တရုတ်တွင် အစအဆုံး လည်ပတ်စေခြင်းသည် အတု လုပ်သူများထံသို့ မိမိ၏ နည်းပညာ များကိုကိုယ်တိုင် ယူလာပေးသလို ဖြစ်နေတော့သည်။
ပမာအားဖြင့် ဖို့ဒ်ကားလုပ်ငန်းသည် တရုတ်တွင် ဘီလျံနှင့်ချီကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၄ နောက် ပိုင်းကာလများတွင် တရုတ်တွင် ဖို့ဒ်ကား တရားဝင်ထုတ်လုပ် ရောင်းချသည့် ဈေးကွက်ထက် မှောင်ခိုဈေး ကွက်က ပိုမိုအရောင်း အဝယ်သွက် သွားစေတော့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဖို့ဒ်ကားမှ အစိတ်အပိုင်းတုများ သည် အိုင်ယာလန်သို့တိုင်အောင် ခြေဆန့်ကာ အတုလုပ်ငန်းရှင်များ စီးပွားဖြစ်နေတော့သည်။
နှစ်စဉ် ကမ္ဘာကျော် အမှတ် တံဆိပ် ရောင်းချမှုများ၏ ၂ဝ ရာခိုင် နှုန်းသည် တရုတ်ပြည်မှ အတုအပ များ ဖြစ်နေတတ်သည်။ အစစ်နှင့်မခြား တစ်ထေရာတည်းတူသည့် ပစ္စည်းတုသည် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင် ပျံ့နှံ့နေသော်လည်း ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်၍ ကုန်သွယ်မှုနောက်ကြောင်းကိုလိုက်သည့် အခါတွင် 'တရုတ်ဖြစ်' များ အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာတတ်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်တွင် စက်ရုံလာတည်မိသော ဒစ္စနေ၊ တာဂတ်၊ ကိုကာကိုလာ၊ Apple စသော အမှတ်တံဆိပ်များသည် သူတို့၏ထုတ်ကုန်ဂုဏ်ကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ကိုယ်ပိုင်ငွေစိုက်ထုတ်ကာ အတုဖမ်းပေးမည့် အေးဂျင့်များကိုပါ အလုပ်ခန့်လိုက်ရသည်။ ထိုနည်းဖြင့် မိမိအမှတ်တံဆိပ်ကိုကာကွယ်ပြီး တရားစွဲဆိုနိုင်ရန်၊ ဟန့်တားနိုင်ရန် ကြံရတော့သည်။
တရုတ်မှ အတုပြုလုပ်သူများသည် သူတစ်ပါးတို့၏ ဥာဏပစ္စည်းများကို အလွယ်တကူ ရယူကာကမ္ဘာ သို့ အတုလုပ်ပြီး ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့် စီးပွားဖြစ်နေကြသည်ဟု တရားသေ တွက်မိလျှင် မှားယွင်းသွားပါလိမ့်မည်။ အတုအပနှင့် စီးပွားရှာသူတိုင်းသည် မိမိလူမျိုးအချင်းချင်း အပေါ်တွင်လည်း သက်ညှာခွင့်မပေးပေ။ ငွေရလျှင် ဘနဖူးသိုက်တူးမည့် ဥာဉ်ရှိသူများက အတုများကို Clone ဟု အမည်တပ်ကာ 'ပေါချောင်ဆိုး' ပစ္စည်းအဖြစ်လည်း ပြန်လည်ရောင်းချကြသည်။
အဆိုးရွားဆုံးမှာ မိမိတိုင်းပြည်မှလူမျိုးများ၏ အသက်အန္တရာယ်ကိုပင် အလေးမထားတော့ဘဲ စားသောက် ကုန်များကို အတုပြုလုပ်ကာ ပြည်တွင်း၌ပင် ပြန်လည် အမြတ်ရှာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးအတွက် ဘေးဖြစ်စေတတ်သော အစားအစာနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်အပေါ် ကမ္ဘာက သတိပြုမိသည့် ကာလမှာ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်ဖြစ်၏။ ထိုစဉ်က မသန့်ရှင်းသော 'တရုတ်ဖြစ်နို့မှုန့်' ကြောင့် တရုတ်ပြည်မှ ရင်သွေးငယ် ခြောက်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး သုံးသိန်းကျော်ခန့်မှာ ဖျားနာခဲ့ဖူးသည်။
၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ မက်ဒေါ်နယ်နှင့် ကေအက်ဖ်စီ စားသောက်ဆိုင်များသို့ အသားတင် သွင်းသော အသားများထဲတွင် အသားဟောင်းများကို ပြန်လည်ထုတ်ပိုးကာ တင်ပို့ထားသည်ကို တွေ့ခဲ့ရဖူး ၏။ အသားတင်သွင်းသည့် ရှန်ဟိုင်းဟူဆီကုမ္ပဏီ၏ လက်ချက်ဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၆ နှစ်တွင် တရုတ်မှ ရေခူစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းနှစ်ခုကို ရှောင်တခင်စစ်ဆေးသည့်အခါ ဓာတု ဗေဒပစ္စည်းသုံးမျိုးနှင့်ရောစပ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားသော ရေခူအတုပေါင်းတန်ချိန် ၁ဝ ခန့်ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည် အရှေ့ပိုင်းရှိဈေးများထံ ရောင်းချရန် ပြုလုပ်ထားသည်ဟုသိရသော တရုတ်ရဲများက ပြည် သူများ ဥပဒ်မဖြစ်စေရန်အတွက် ရေခူအတုသည် အဝါရောင်အဆင်းလည်းမရှိ၊ အနံ့လည်းကင်းသည်ဟု ခွဲခြားသိနိုင်ရန် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ ရဖူးသည်။
ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း တရုတ်ရိုးရာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံငယ်များကို လည်း လိုက်လံဖမ်းဆီးကြသေးသည်။ တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း တီယန်ကျင်းမြို့အနီး ဒူးလျူးမြို့ငယ်တစ်ခုတွင် တရုတ်ပဲငံပြာရည်၊ ကြက်သားမှုန့်များ အတုပြုလုပ်သည့် စက်ရုံပေါင်း ၅ဝ ခန့် ရှိခဲ့သည်။ နာမည်ကျော် Maggi ၊ခနောစသောတံဆိပ်များကို အတုပြုလုပ်ရာတွင် စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှ စွန့်ပစ်ဓာတ်ဆားများနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးကြသည်။
တရုတ်နို့မှုန့်၊ တရုတ်ကစားစရာ အရုပ်များမှတစ်ဆင့် ရောဂါဖြစ်သော အဖြစ်အပျက်များက ကမ္ဘာ့ လူထုကို မျက်ခုံးလှုပ်စေခဲ့သလို၊ အစားအစာတုနှင့် ဆေးဝါးတုကများကလည်း ကြောက်စရာကောင်း လောက်အောင် သတင်းဆိုးများ မကြာခဏ ထွက်ပေါ်ခဲ့၊ ထွက်ပေါ်ဆဲ ဖြစ်သည်။
အဆိုးရွားဆုံးများတွင် လူတို့၏လောဘဖြင့် သားငါး၊ အသီးအနှံများအပေါ်တွင် မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ခြင်း၊ ဓာတ်မြေသြဇာသုံးခြင်းများ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း မြင့်တတ် လာချိန်ရောက်မှ ကမ္ဘာလူထုမှာ အတုအပနှင့်သဘာဝ မဟုတ်သောနည်းလမ်းများ၏ အန္တရာယ်ကို ဂရုပြုလာ တော့သည်။ သို့သော် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အချို့သော ဒေသများတွင် မူလမျိုးစိတ် ပျက်သုဉ်းမှုများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌လည်း အချို့သောတောင်သူများသည် တရုတ်ကုမ္ပဏီများမှပေးသော ပြောင်းမျိုးဖြင့် မိရိုးဖလာပြောင်းမျိုးများအပေါ် အစားထိုးကာ လုပ်ကိုင်ကြသည်များရှိနေသည်။ သာမန်အားဖြင့် မြန်မာ့ ပြောင်းက တစ်ပင်လျှင် အများဆုံး နှစ်ဖူး၊ သုံးဖူးသာ ထွက်ချိန်တွင် တရုတ်မျိုးသည် မူလထက်များစွာ ထွက်သည့် မျိုးကိုပေးခဲ့သည်။
ခူးဆွတ်ပြီးလျှင်လည်း မျိုးစေ့ဖြန့် ဖြူးရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကပင် ပြန်လည်ဝယ်ယူကြသဖြင့် စိတ်ပူစရာ မရှိဟုယူဆကာ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
သို့သော် အချို့တောင်သူများက ထိုပြောင်းများကို မျိုးယူကာ နောင်နှစ်တွင် ပြန်ကြဲသည့်အခါတွင် ပထမအကြိမ်ကဲ့သို့ အဖူးရေမများတော့ဘဲ တစ်ဖူး၊နှစ်ဖူးသာထွက်သည်ကို တွေ့ ကြရသည်။
ထို့အတွက် နောင်နှစ်များတွင် မိမိသီးနှံကိုပြန်လည်ဝယ်ယူမည့် ကုမ္ပဏီမှပေးသော ပြောင်းမျိုးကို မှန်မှန်ဝယ်ကြရသည်။ ထိုပြောင်းမျိုး ဖြစ်ထွန်းရန်အတွက် သီးသန့်အသုံးပြုရမည့် ဓာတ်မြေသြဇာကိုလည်း မဝယ်မဖြစ် ဝယ်ယူကြတော့သည်။ သဘာဝမြေသြဇာသည် ထိုပြောင်းမျိုးနှင့် သိပ်အထွက်မတိုးပေ။ တစ်ချိန် တွင် ဓာတ်မြေသြဇာ၏ ဆိုးကျိုးကြောင့် မြေထုတွင် ဓာတုဓာတ်ကြွင်း အာနိသင် များပြားကာ မူလမြေဆီလွှာ ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်သွားနိုင်သည်။
စိုက်ပျိုးသူနှင့် ပစ္စည်းပြန်ကောက်သူ အပြန်အလှန် အလုပ်ဖြစ်နေသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း မူလ မြေဆီလွှာပျက်စီးခြင်းနှင့် မူလသဘာဝပြောင်းမျိုးများ ရှားပါးသွားခြင်းတို့သည် နောင်တစ်ချိန်တွင် ဒုက္ခပေးနိုင်သည့်အချက်များ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အော်ဂင်းနစ်ပြောင်းဖူးခင်းများ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဓာတုဗေဒဆေးများသုံးထားသည့် သစ်သီးဝလံများအပေါ် လူတို့က ကြောက်လန့်လာ သည့်အခါတွင် တစ်ချိန်က ဇီဝမျိုးပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားသော သစ်သီးများ၊ ဓာတုဆေးသုံးစွဲထားသော အပင်များ နေရာတွင် သဘာဝမြေသြဇာကို တမင်ပြန်သုံးကာ စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးရောင်းချရသည်။ မူလ မျိုးစိတ်ထိန်းသိမ်းထားသော သဘာဝထွက်ကုန်၊ ဘာဝမြေသြဇာသုံးသီးနှံအဖြစ် ဈေးကြီးပြန်ပေးဝယ်ကာ စားသုံးကြရ၏။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် Organics Food များသာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ရောင်းဝယ်လာသောအခါ သဘာဝဟုယုံကြည်နိုင်လောက်သော အထောက်အထားအတုများဖြင့် တံဆိပ်အမျိုးမျိုးကပ်ထားသော ထုတ် ကုန်များ အလျှိုလျှိုပေါ်တော့၏။ ဤသို့ဖြင့် ရောင်းပန်းလှလောသော သဘာဝမြေသြဇာသုံး Organic Food ထုတ်ကုန်များနေရာတွင် စီးပွားဖြစ်အတုအယောင်များက တဖြည်းဖြည်း ပြန်လည်နေရာယူလာခြင်းဖြင့် မုန့်လုံးစက္ကူကပ် သံသရာလည်နေရသည်။
ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း တရုတ်မှထုတ်လုပ်သည့် အစားအစာများတွင် အငြင်းပွားဖွယ်၊ သံသယဖြစ်ဖွယ် တွေ့ရှိမှုများ နိုင်ငံတကာ စစ်ဆေးမှုများအလယ်တွင် အတောမသတ်နိုင်လောက်အောင် ထွက်ပေါ်လာ၏။ စားသုံးသူများဘက်မှ တိုင်ကြားသံများ၊ စစ်ဆေးသူများဘက်က တားမြစ်သံများ တညံညံဖြစ်လာသည့် အခါတိုင်း ကြည့်လိုက်လျှင် တရုတ်နိုင်ငံထုတ်များ အဖြစ်တွေ့ရသည်ကများသည်။ အရာရာတွင် အတုလုပ် ပုံဖမ်းတက်သော 'တရုတ်ဖြစ်' များသည် စားသုံးသူများ အလွယ်တကူ သံသယရှိဖွယ် ထုတ်ကုန်များအဖြစ် မကြာခဏ တွေ့ကြရသည်။
'တရုတ်ဖြစ်' များကလည်း တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးနိုင်လောက်အောင် အတုလုပ်နည်းများက အလျင်မီ မြန် ဆန်နိုင်လွန်းလှသည်။ သဘာဝဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် မြန်မြန် ကြီးထွား၊ ကြာရှည်ခံသည့် ဓာတု နည်းလမ်းများက ပုန်းအောင်းနေတတ်သည်။
ပလပ်စတစ်ဓာတ်ပါသော ဆန်၊ ဓာတုနည်းဖြင့်လုပ်ထားသော ကြက်ဥ၊ အာဆင်နိတ်ဓာတ်လွန်ကဲ သည့် အစားအစာ စသဖြင့် မျက်စိလည်လောက်အောင် ကိုယ်ကျိုးအတွက်သာကြည့်သည့် စီးပွားဖြစ်နည်း များကလည်း အမယ်စုံလှသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အစစ်အမှန်အပေါ်၌ပင်လျှင် သံသယထားကာ အလွယ်တကူ ယိုးစွပ်ခံရသည်အထိ နာမည်ပျက်နေသည်။
တရုတ်မှ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ထုတ်ကုန်များအပေါ် အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် လတ်တလော သံသယ ဖြစ်နေမှုများ များပြားလွန်းသည့်အတွက် ပြည်တွင်း လယ်သမားများ၏ ထုတ်ကုန်မဟုတ်လျှင် မယုံကြည် တော့သောအဆင့်သို့ ရောက်လာ၏။ တရုတ်နိုင်ငံမှတင်ပို့သော လယ်ယာထွက်ပစ္စည်းများသည် အော်ဂင်းနစ် နည်းဖြစ်သည်ဟု အတိအလင်း ကြေညာထားသည့်တိုင်အောင် သံသယ မျိုးစုံဖြင့် စိတ်မလုံကြတော့ပေ။
(၁) တရုတ်မှ အော်ဂင်းနစ်ထုတ်ကုန်များတွင် ဓာတုအဆိပ်သင့်မှုများ ပါဝင်နိုင်သည်ဟူသောသံသယ။
အော်ဂင်းနစ် ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်များ ပေးထားသည့်တိုင် ယင်းလယ်ယာထွက် ကုန်သည် ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ်ဆေးနှင့် ဓာတ်မြေသြဇာအပါအဝင် ဘေးဖြစ်စေသည့် ဓာတုဆေးများ မပါရှိဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော်လည်း စိုက်ပျိုးသည့်တိုင်းပြည်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဘေးကင်းမှုအနေ အထားကို ထည့်သွင်းထားသည့် စည်းမျဉ်းမျိုးမရှိဟု ဆိုကြသည်။
ကျောက်မီးသွေး စက်ရုံများမှထွက်သော ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်များကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုများ နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ဓာတုစွန့်ပစ်မှုများဖြစ်သော ရေ၊ မြေ ပျက်စီးမှုများ လက်ညှိုး ထိုးပြစရာ ဖြစ်နေသည်။ ထို့အတွက် တရုတ်လယ်သမားများသည် ပြဒါးနှင့် အခြားဓာတုပစ္စည်းများ ရောနှော နေသည့်ရေများကို စိုက်ခင်းအတွက် အသုံးပြုမိကောင်းပြုနိုင်သည်ဟု ယူဆကြသည်။
ဤသည်မှာ အမေရိကန်တို့ပြောသော သံသယတစ်ခုဖြစ်သည်။
(၂) တရုတ်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုက်နာမှု မရှိသလောက်နည်းသည် ဟူသော သံသယ။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် လေထု၊ ရေထု ညစ်ညမ်းသည့် နေရာအများ အပြား ရှိ၏။ မြို့တော်ဘေကျင်းပင်လျှင် လေထုညစ်ညမ်းမှု ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆိုးရွားခဲ့သော ရက်လများကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဖြတ်သန်းနေရသည်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် များ နှစ်စဉ် ခံစားနေရခြင်းကလည်း သက်သေပြနေ၏။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အလေးထားမှု အားနည်းခြင်းများကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုမှာ ဖြေ ရှင်းမရသော အဆင့်သို့ပင် ရောက် နေလေသည်။
ချန်ကင်းမြို့တစ်မြို့တည်းကို ကွက်ကြည့်လျှင်ပင် နှစ်စဉ် အညစ်အကြေးတန်ချိန် တစ်ဘီလီယံ ထွက် ရှိနေပြီး ယန်စီမြစ်ထဲသို့ စွန့်ပစ်သည့်အတွက် ရေထုညစ်ညမ်းမှုသာရှိနေသည်။ ရှန်ဟိုင်းတွင် ထွက်သော ရေပေါ်မြေ၏ တစ်ရာခိုင်နှုန်းကသာ သောက်သုံးရန် စိတ်ချရသည်။
လေ့လာဆန်းစစ်မှုများအရ တရုတ်မှမြစ်များအနက် ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းသည် ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်နေပြီး နိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိ လယ်မြေဧရိယာတစ်ဝက်ခန့်မှာ မြေအောက် ရေများမှာ ၉ဝရာခိုင်နှုန်းသည် ညစ်ညမ်း နေသည်ဟု သိထားကြသည်။ ထိုရေများက အော်ဂင်းနစ် စိုက်ကွင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနေလျှင် စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သူများဘက်က မည်မျှပင်ရိုးသားစေကာမူ ရေမြေသဘောအရ ယုံကြည်ရန်နည်းခြင်းက ဒုတိယ သံသယဖြစ်သည်။
(၃) တရုတ်မှ အေဂျင်စီများနှင့် အစိုးရဌာနများများတွင် မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ဆောင်လေ့မရှိဟူသောသံသယ။
Gungzhou Daily မှ ရေးသားချက်တစ်ခုတွင် စားသုံးသူတစ်ယောက်သည် အော်ဂင်းနစ် ထုတ်ကုန်တု အတွက် သတင်းပေးတိုင် ကြားသည့်အခါတွင် တာဝန်ရှိသူများသည် ထွက်ပေါ်လာသည့် ပြဿနာကို အဖြေမရှာမီ ဌာနကြီးလေးခုအကြား တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ဘော်လီဘောပုတ်ကာ နေတတ်သည်ကများ သည်ဟု ဖော်ပြဖူးသည်။
ထို့ပြင် တရုတ်မှတင်သွင်းသည် ထုတ်ကုန်များအပေါ် ခြေရာခံစစ်ဆေးသည့်အခါ အော်ဂင်းနစ် ပဲစေ့များ၊ ဘယ်ရီသီးများတွင် အန္တရာယ် ဖြစ်စေသည့် ပိုးသတ်ဆေးအပြည့် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ကြရသည်။ ထို့ အတွက် တရုတ် အေဂျင်စီများသည် လိုက်နာရမည့် စဉ်းကမ်းများကို မျက်နှာလွှဲကာ ထောက်ခံချက်များ ပေး လေ့ရှိသည်ဟု သုံးသပ်ကြသည်။
ထောက်ခံချက်များ ရယူချိန်တွင် အေဂျင်စီများနှင့် ပူးပေါင်းကာ အထောက်အထားတုများ လုပ်ကိုင် သကဲ့သို့ ကမ္ဘာသိထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူများ၏ ဂုဏ်သတင်းကို ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲ တရားမဝင် ကြော်ငြာ ထည့်သည့် လုပ်ရပ်များကလည်း တရုတ် ထုတ်ကုန်များအပေါ် စိတ် ပျက်စရာဖြစ်သည်။
ယခုလဆန်းပိုင်း အတွင်းကလည်း ရူပဗေဒဖြင့် နိုဗယ်ဆုရရှိခဲ့သော သိပ္ပံပညာရှင် Andre Geim က တရုတ်မှ အောက်ခံဘောင်းဘီ ထုတ်လုပ်သည့် Jinan Shengquan Group သည် ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲ သူ၏ အမည်နှင့် ဓာတ်ပုံကိုသုံးကာ ကြော်ငြာနေသည်ဟု South China Morning Post သတင်းစာသို့ ဖွင့်ဟ ခဲ့ကြောင်း ယခုနှစ် သြဂုတ် ၇ ရက်က ဖော်ပြထားသည်။
Andre Geim သည် graphene နည်းပညာဖြင့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် ပူးတွဲနိုဗယ်ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ Graphene သည်ကာဘွန် အက်တန်၏ အလွှာတစ်ခုတည်းဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်သော အလွန်ပေါ့ပါးသည့် material တစ်ခုဖြစ်သလို သံမဏိထက် အဆ ၂ဝဝ ပိုမိုခိုင်မာသည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် အပူတို့အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ် ကမ္ဘာကိုချပြနိုင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှ သုတေသီ အချို့က Graphene အပေါ် ဘီလျံချီကုန်ကျသည့် သုတေသနများ ပြုလုပ်သည့်အခါ ကင်ဆာကုထုံးအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုနိုင်ဖွယ် အထောက်အထားများ တွေ့ရှိခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ Shandong ပြည်နယ်အရှေ့ဖျားပိုင်းတွင် အခြေစိုက်သည့် ယင်းအောက်ခံ အဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီက သူတို့ထုတ်ကုန်သည် Graphene ပါဝင်သဖြင့် အပူကို ထိန်းပေးခြင်း၊ အနံ့ဆိုးဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ ဘက်တီးရီးယားများကို သေစေနိုင်ခြင်းတို့သာမက ဝတ်ဆင်သူသည် အမျိုးသမီးဖြစ်လျှင် ရင်သားကြီးထွားစေပြီး အမျိုးသားသည် လိင်စွမ်းအားမြင့်လာစေမည်ဟု ကြော်ငြာသည်။ ထိုကြော်ငြာတွင် Andre Geim ၏ ဓာတ်ပုံကိုပါ အသုံးပြုထားသည်။ ယင်းကြော်ငြာသည် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ၊ စီးပွားရေး ဝက်ဘ်ဆိုက်များအထိ အသုံးပြုထားသည်။ Andre Geim က သူ၏ ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲ နာမည်အသုံးပြုထားခြင်းသည် ရှက်စရာကောင်းသလို Graphene သည် ‘ery black’ ဟု ပြောရလောက်အောင် ရှိနေသဖြင့် အပူထိန်းမပေးရုံမျှမက အပူကို ပိုထုတ်နိုင်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
ထုတ်ကုန်များ ရောင်းချရန်အတွက် လိုသလိုအမွှန်းတင်ကာ ထောက်ခံချက် အတုမရလျှင်ပင် နိုဗယ် ဆုရှင်၏ နာမည်ကို ယူသုံးသည်အထိ အတင့်ရဲတတ်ကြသည်။
တရုတ်မှ တင်သွင်းသည့် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များတွင် ခဲဆိပ်ပါဝင်မှုများရှိနေခြင်း၊ တရုတ်တွင် အော်ဂင်းနစ်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်နှင့် အခြားအထောက်အထားများ အတုပြုလုပ်ကာ ကုန်သွယ်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးမှုများအပေါ် တာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများက အပြည့်အဝကြီးကြပ်ခြင်းထက် ပုဂ္ဂလိကစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များလက်သို့ ထိုးအပ်တတ်ခြင်း စသည့်အလေ့အထများမှာ စစ်မှန်သော အော်ဂင်း နစ်သီးနှံအပေါ်၌ပင် သံသယဖြင့် လက်တွန့်စေသောအချက်များ ဖြစ်နေတော့သည်။
(1) Cracking down on China’s dangerous fake food sector.
(2) To CatchaCounterfeiter. Nearly all the world’s fake products come from China.
(3) Fake “Organic” Food From China is FLOODING Store Shelves. Here’s What You Need to Know.
(4) I'm not advertising underware: UK Nole laureate in fake claims row with chinese firm.